21 Xildhibaan oo Guddoonka Baarlamaanka Puntland ka dalbaday fadhi aan caadi ahayn – Radio Daljir
21 Xildhibaan oo Guddoonka Baarlamaanka Puntland ka dalbaday fadhi aan caadi ahayn
Maajo 12, 2015 9:34 b 0
Garowe, 12, May, 2015 – Waxaa saxaafadda soo gaartey warqad ay ku saxiixan yihiin 21 Xildhibaan, kuwaas oo dalabanaya in Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ee Puntland isugu yeero kalfadhi aan caadi ahayn oo deg-deg ah si looga tashado xaaladda Puntland.
Xildhibaanada ayaa u cuskadey sababaha keeney dalabkooda saddex qodob oo kala ah.
Xildhibaanadu waxay sheegeen in al-Shabaab ay u suurta gashey saacado kooban in ay qabsadaan tuulada Yalho oo Bosaso u jirta qiyaastii 45km, waxaana ay ku dileen ciidankii Dowladda. Iyaga oo weli ka hadlaya amniga waxay sheegeen in ciidamada Somaliland ay yimaadeen duleedka Garoowe ee caasimadda Puntland, waxaana ay ka dayriyeen amniga caasimadda ganacsiga ee Puntland Bosaso.
Dhanka dhaqaalaha ayey sheegeen in cabasho xoog leh jirto gaar ahaan ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, laguma sheegin sababta cabashada warqadda Xildibaanadu u gdubiyeen Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Siciid Xasan Shire.
Sida uu qabo dastuurka Puntland Golaha Wakiilada ee Puntland waxay yeelan karaan sanadkii laba kalfadhi oo keliya, laakiin waxaa dastuurku oggolaanayaa in kalfadhi aan caadi ahayn yeelan karaan, waxaana kamid ah qodobada dastuurku sheegayo sidan
Qodobka 65aad ee Dastuurka:
2. Kalfadhiga aan caadiga ahayan, waxaa isugu yeeri kara Guddoomiyaha Golaha Wakiillada, Madaxweynaha, ama waax (¼) xubnaha Golaha Wakiillada, kadib marka la helo codsi sababeysan.
Waxaa ku saxiixan dalabka 21 Xildhibaan.
Shirweynaha ka hortagga argagixisada iyo istaraatijayada dabargoynta oo maantay ka furmay Garowe.